Myanmar Small Businesses Development: အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ နိုင်ငံခြားပို့ကုန်တင်ပို့နိုင်မှုအလားအလာ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြှင့်ရာတွင် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည့် သတင်းအချက်အလက် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ နည်းပညာရပ်များကို ရှာဖွေ စုဆောင်းပြီး ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် တင်ပြ သွားပါမည်။
အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ နိုင်ငံခြားပို့ကုန်တင်ပို့နိုင်မှုအလားအလာ
ဒီသုတေသနဆောင်းပါးက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့် ထွန်းသစ်စနိုင်ငံများရှိ အသေးစား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၏ နိုင်ငံခြားပို့ကုန်အလားအလာကို ပြဌါန်းပေးသော အကြောင်းရင်းများကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် စီးပွားရေးပတ်၀န်းကျင်နှင့် လုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက် စစ်တမ်းမှ အချက်အလက် များကို အသုံးပြုပြီး လေ့လာစမ်းစစ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၄၁ နိုင်ငံက ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းပေါင်း ၉၈၀၁ ခုကို ဘောဂဗေဒနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုတွေ အသုံးပြုပြီး လေ့လာထားပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေကတော့ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည် တခုကိုပစ္စည်းတင်ပို့ရာမှာ ကြုံတွေ့ရမယ့် အတားအဆီးတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အတွက် လုပ်ငန်းရဲ့ အရွယ်ပမာဏက ပိုအရေးပါပြီး၊ လုပ်ငန်းရဲ့ သက်တမ်းကတော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ တခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ပစ္စည်းအသစ်၊ လုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေ တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေက နိုင်ငံခြားဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ အလားအလာ ပိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တီထွင်ထုတ် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိမှုဟာ ပို့ကုန်ပမာဏ ပိုမိုတင်ပို့နိင်မှုအပေါ်မှာတော့ အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး။ တခြားတွေ့ရှိချက်တခုကတော့ ငွေရေးကြေးရေး အကျပ်အတည်းမရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက နိုင်ငံခြားကို ပစ္စည်း တင်ပို့သူဖြစ်ဖို့ ပိုအလားအလာရှိပြီး၊ ပို့ကုန်ပမာဏလည်း ပိုမိုတင်ပို့နိင်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်တွေအရ စီးပွားရေးရာမူ၀ါဒချမှတ်သူတွေအနေနဲ့ သေးငယ်တဲ့ လုပ်ငန်းအသစ်တွေကို မြန်မြန် ကြီးထွားလာအောင် မလိုအပ်တဲ့ အတားအဆီးတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသေးစား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိဖို့ မူ၀ါဒချမှတ်ပေးပြီး လိုအပ်တာတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေကို ငွေကြေးလည်ပတ်မှုကောင်းအောင် လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့ပေးပြီး ဘဏ်နဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေက တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင် စွမ်းရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ငွေပိုမိုချေးလိုအောင် အားပေးဖို့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
(စင်ကာပူ စီမံခန့်ခွဲမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဂျာနယ် တွင် ဖေါ်ပြရန်လက်ခံပြီး)
SMEs and Exports: Firm Level Evidence from Developing and Emerging Economies
This paper examines the factors that facilitate the export propensity of Small and Medium sized Enterprises in developing and emerging economies by using firm-level data from the most recent Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS). The working sample analysed in this paper includes 9801 manufacturing firms from 41 emerging and transition countries. The findings of the paper suggest that economies of scale is more important than learning economies for SMEs to overcome barriers to participating in export activity. Whilst innovative firms are more likely to participate in export activity (export propensity), the impact of innovation on incremental increase in the ratio of exports to total turnover (export intensity) is not significant. On the other hand, the findings have confirmed that financially less constraint SMEs are more likely to participate in export markets as well as benefit from higher export intensity than SMEs with financial constraints. The findings of the paper may shed some light on designing and formulating strategic decisions and SME related policies to promote export participation. The results of the paper suggest it is important to support young SMEs to grow quickly since economies of scales is more important than learning economies in emerging economies. One policy implication could be for governments to focus on designing their industrial policies to remove barriers to expansion in order to support SMEs’ export potential. Policy makers should also createabusiness environment which supports innovative firms. It is also important to implement necessary policies to provide liquidity assistance and financial reforms that encourage banks and financial institutions to provide loans to innovative SMEs.
Posted by Myint Moe Chit at 5/13/2012 04:27:00 pm
တစ်ပါတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စီးပွားရေးသတင်း
ကားတင်သွင်းခွင့်မူ၀ါဒအသစ်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး အ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတခု ရေးဆွဲခြင်း Writing...
Economic reforms in Myanmar: First things first...
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ (၁)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များအတွက် ဈေးကွက်သုတေသန Small...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို တစ်ခုစတင်ဖို့ သင်အဆင်သင့်ဖြစ...
ထွန်းသစ်စအရှေ့အာရှနိုင်ငံများတွင် ငွေလဲလှယ်နှုံး အ...
အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ နိုင်င...
ဘဏ္ဍာရေးအကြပ်အတည်း (Financial Crisis) ကိုဖြစ်စေခဲ့...
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခု စတင်ဖို့ ပြင်ဆင်ခြင်း...
SME ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (18)
Myint Moe Chit